Amagqabantshintshi eArduino Shields
Amakhaka iziqwenga zehardware ezihleli ngaphezulu kweArduino yakho, rhoqo ukuyinika injongo ethile. Umzekelo, ungasebenzisa ikhaka ukwenza kube lula ukudibanisa nokulawula ii-motors okanye ukuguqula iArduino yakho ibe yinto enzima njengefowuni ephathekayo. Ikhaka lingaqala njengesixhobo esithandekayo sehardware ebesilinga kwaye efuna ukwabelana noluntu. Okanye umntu othengisayo (okanye inkampani) angayila ikhaka ukwenza isicelo sibe lula ngokusekwe kwimfuno yoluntu yaseArduino.
Izikhuselo zinokuba lula okanye zintsokothe. Ziyathengiswa zidityanisiwe okanye njengeekiti. Iikiti zikuvumela inkululeko engaphezulu yokuqokelela ikhaka leArduino njengoko ufuna ukuba njalo. Ezinye iikiti zifuna ukuba udibanise ukujikeleza kweebhodi, nangona amakhaka antsonkothileyo sele sele edityanisiwe ubukhulu becala, efuna izikhonkwane zentloko kuphela.
Izihlangu zikwenza ukuba usebenzise iArduino yakho ngeenjongo ezingaphezulu kwesinye kunye nokutshintsha loo njongo ngokulula. Bayipakisha ngokucocekileyo i-elektroniki yesekethe ngendlela efanayo neArduino, kwaye bayafakwa ukuze badibanise imisebenzi eyahlukeneyo. Kodwa bonke kufuneka basebenzise izikhonkwane ezifanayo kwiArduino, ke ukuba ubeka amakhaka, jonga abo bafuna ukusebenzisa izikhonkwane ezifanayo. Bahlala bedibanisa izikhonkwane ze-GND, kananjalo, kuba naluphi na unxibelelwano olwenziwe yiArduino yakho kunye nesinye isixhobo sifuna i-GND efanayo.
Kwithiyori, amakhaka anokubekwa ngaphezulu komnye naphakade, kodwa kuya kufuneka uthathele ingqalelo amanye amanqaku ngaphambi kokudibanisa:
Ubungakanani ngokwasemzimbeni: Ezinye iikhaka azifanelani phezulu kwelinye. Izinto eziphakamileyo kuneziseko zentloko zinokuchukumisa icala langaphantsi layo nayiphi na ibhodi engaphezulu kwayo. Le meko, enokubangela imijikelezo emifutshane ukuba unxibelelwano lwenziwe olungafanelekanga, lunokonakalisa kakhulu iibhodi zakho.
Uthintelo lwamagalelo kunye neziphumo: Ukuba igalelo okanye imveliso ithintelwe lelinye ikhaka, iba yinto engafunekiyo. Umzekelo, akukho ndawo yokuba ne-joystick shield okanye i-LCD shield phantsi kwenye i-shield ngenxa yokuba kungasetyenziswa enye.
Iimfuno zamandla: Ezinye izixhobo zifuna amandla amaninzi. Nangona kulungile ukuba amakhaka asebenzise amandla afanayo kunye nezikhonkwane zomhlaba, kukho umda kwinani langoku elinokuhamba kwelinye igalelo / ukuphuma (I / O) izikhonkwane: 40mA ngepini nganye kunye nama-200mA max phakathi kwayo yonke i / O izikhonkwane. Dlula koku, kwaye ubeka emngciphekweni wokonakalisa kakhulu ibhodi yakho kunye nalo naliphi na elinye ikhaka eliqhotyoshelweyo. Kwiimeko ezininzi, unokuyilungisa ngokulula le ngxaki ngokunika amandla iArduino kunye namakhaka avela kunikezelo lwangaphandle lwangaphandle ukuze okwangoku kungagqithiswa ngeArduino. Qiniseka ukuba usebenzisa i-GND eqhelekileyo ukuba unxibelelana phakathi kwebhodi usebenzisa i-I2C, i-SPI, okanye uthotho.
Izikhonkwane: Amanye amakhaka afuna ukusetyenziswa kwezikhonkwane ezithile. Kubalulekile ukuba uqiniseke ukuba amakhaka awaphindi kabini kwizikhonkwane ezifanayo. Kwimeko efanelekileyo, i-hardware iya kudideka nje; Kwimeko embi, ungathumela umbane kwindawo engeyiyo kwaye wonakalise ibhodi yakho.
Isoftware: Ezinye zezi khaka zifuna amathala eencwadi athile ukuze asebenze. Kunokubakho ukungqubana kumathala eencwadi abiza imisebenzi efanayo, ke qiniseka ukuba ufunda ngokufunekayo kwikhaka lakho.
Ukuphazamiseka kwirediyo / iWi-Fi / i-GPS / i-GSM: Izixhobo ezingenazingcingo zifuna indawo yokusebenza. Hambisa ii-eriyali okanye ii-eriyali kude nebhodi ukufumana umqondiso ocacileyo. Ukuba i-eriyali inyuswe ebhodini, kungumbono ombi ukuyigquma. Ngalo lonke ixesha zama ukubeka amakhaka angenazingcingo phezulu kwisitaki.
Uphengululo lweArduino shield
Ukukunika umbono wezikhuselo ezikhoyo, jonga ezinye zezona khaka zeArduino ezinomdla neziluncedo kwimarike kwaye ikubonise ukuba ungalufumana phi ulwazi oluthe kratya.
Amaxabiso adwelisiweyo aphantsi kotshintsho uhlala usenza uphando ngaphambi kokwenza isigqibo sokuthenga. Impendulo eninzi kuzo zonke ezi mveliso iyafumaneka kwi-Intanethi, ke soloko ufunda amagqabantshintshi kunye neeforamu ukuze uyiqonde kakuhle into oyithengayo.
Olu luhlu lwezikhuselo lugubungela inani elikhulu losetyenziso olwahlukileyo kunye namandla amakhulu eeprojekthi zeArduino. Kwiiprojekthi ezininzi, ikhaka yiyo yonke into oyifunayo, kodwa ikhaka likwalilitye elinqabileyo lokuqinisekisa ingqikelelo ngaphambi kokucokisa okanye ukwenza iprojekthi encinci.
Amaxabiso abonelelweyo avela kuluhlu lwabasasazi ukubonisa ixabiso lexabiso lezinto. Ukuba ungumthengi we-savvy okanye ujonge ukuthenga ngobuninzi, unokukwazi ukunciphisa iindleko.
IProto shield shield kit3
Yenziwe ngu: Arduino
Ixabiso: $ 9.90 Ivenkile yeArduino
cream ukumisa ukukhula kweenwele
Izikhonkwane ezisetyenzisiweyo: Akukho
Ikhaka leProto liqonga lokwakha iisekethe zesiko kwiArduino yakho. Uninzi lwe-Arduino shields longeza umsebenzi othile kwiArduino yakho, kodwa ngeProto Shield ungathatha isigqibo sokuba uyisebenzisa njani. Thatha ubeko lwebhodi yezonka esele ikho kwaye uzithengise kumphezulu wekhuselo leProto ukwenza ukuba iprojekthi yakho yomelele ngakumbi. Iikhuselo zeProto nazo ziza ngobukhulu obukhulu ukuhambelana neenyawo zika-Arduino Mega. Olunye uphawu olusebenzayo lwezi khaka yindawo yokuncamathisela iinxalenye ze-SMD, ekunokuba nzima ukuzenza ngenye indlela.
Ikhonkco elihlangeneyo elipheleleyo leProto.
Ikhaka leProto lithengiswa ngokudibeneyo okanye njengekhithi efuna ukuthengiswa.
Unokufumana iinkcukacha malunga nekhaka kwi Iphepha lemveliso yeArduino .
Yenziwe ngu: WingShield Industries
Ixabiso: $ 14.95 ukusuka kwiAdafruit
I-ProtoScrew shield iyafana ne Proto shield kodwa ine terminals ezinkulu ezidityaniswe nezikhonkwane. Eli nqaku lilungile kwizicelo ezinamagalelo amaninzi anokufuna ukutshintsha okanye ukutshintshiselana, okanye ukulungiselela nje indibano lula kunye nokudiliza. Ukutshintsha isiqwenga socingo kulula kakhulu ngeeterminal terminals kunokuzifaka nge-soldering, ke yigcine engqondweni le nto xa ucwangcisa iprojekthi yakho elandelayo.
Ikhaka leprotoScrew lithengiswa njengekhithi kwaye lifuna ukuthengiswa. Unokufumana iinkcukacha ezithe kratya kwifayile ye- Iphepha lemveliso leSparkFun .
Isihlangu seAdafruit Wave v1.1
Yenziwe ngu: Adafruit
Ixabiso: $ 22.00 ukusuka kwiAdafruit
Izikhonkwane ezisetyenzisiweyo: 13, 12, 11, 10, 5, 4, 3, 2 kwi-Uno R3
Ikhaka le-Wave sisixhobo esinexabiso eliphantsi ekuvumela ukuba udlale izandi okanye umculo ngeArduino yakho. Ikhaka le-Wave likuvumela ukuba udlale iifayile ze-WAV ngokuthe ngqo kwikhadi le-SD, okwenza kube lula ukulayisha kunye nokutshintsha iifayile zesandi kwikhompyuter yakho. Ukuze usebenzise ikhaka, udinga ilayibrari ye-WaveHC, efumaneka kwifayile ye- iphepha lemveliso kunye neKhowudi kaGoogle.
Ikhaka elihlanganisene ngokupheleleyo.
Ikhaka le-Wave lithengiswa njengekhithi kwaye lifuna ukuthengiswa. Umfundi wekhadi le-SD kufuneka asebenzise izikhonkwane ezili-13, 12, kunye no-11 kuba baxhasa isantya esiphezulu sePeripheral Interface (SPI), okuyiprotocol efunekayo yokuhambisa idatha ngokukhawuleza. I-Pin 10 isetyenziselwa ukunxibelelana nomfundi wekhadi le-SD, kwaye izikhonkwane ezi-5, 4, 3, kunye no-2 zisetyenziselwa ukuthetha nesiguquli sedigital-to-analog (DAC), esiguqula isiginali yomculo wedijithali ibe ngumbane we-analog.
Ngolwazi oluthe kratya, ndwendwela iphepha lemveliso kwi Iwebsite yeAdafruit .
MP3 umdlali ikhaka
Yenziwe ngu: SparkFun
Ixabiso: $ 24.95 kwiSparkFun
Izikhonkwane ezisetyenzisiweyo: 13, 12, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 kwi-Uno R3
Guqula iArduino yakho ibe ngumdlali weMP3 ngesixhobo sokudlala esiyi-MP3 ekulula ukusidibanisa kwiSparkFun! Ayikwazi kuphela ukucacisa iifayile ze-MP3, ikwanakho nokucacisa i-Ogg Vorbis, i-AAC, iWMA, kunye ne-MIDI. Ikhaka le-MP3 likwanomfundi wekhadi le-MicroSD ukulungiselela ukulayishwa kweefayile, kwaye ine-3.5mm mini jack onokuthi uqhagamshele kuninzi lweenkqubo zesithethi.
Ikhithi yokukhusela i-MP3.
Ikhaka lomdlali weMP3 lihlanganisiwe kodwa lifuna ukuhlengahlengiswa okuncinci ukuze uncamathisele izikhonkwane zentloko okanye iziseko zentloko. Umfundi wekhadi le-SD usebenzisa izikhonkwane ezili-13, ezili-12, kunye nezili-11. Usebenzisa ipini 9 ukuthetha nomfundi wekhadi le-SD. Sebenzisa izikhonkwane 8, 7, 6, kunye no-2 bathethe i-MP3 audiodecoder VS1053B, kwaye usebenzise izikhonkwane ezi-4 kunye nezi-3 ekusebenzeni okongeziweyo kwe-MIDI.
Ngolwazi oluthe kratya, ndwendwela i- Iphepha lemveliso leSparkFun . Bona kwakhona iphepha lokufundisa . Amagqabantshintshi angezantsi kwedilesi yokufundisa uninzi lwemicimbi kwesi sikhokelo. Omnye umsebenzisi ubhale nelayibrari ukwenza ubomi bakho bube lula- umzekelo omkhulu woluntu lwaseArduino oluxhasa iimveliso ezikhoyo.
Soloko ufunda amagqabantshintshi kunye nokungeniswa kweforum kwiimveliso kunye neekiti. La magqabantshintshi ahlala eneenkcukacha ezininzi malunga nokukhululeka (okanye ubunzima) bemveliso. Le yindawo yokuvakalisa iingxaki zakho. Qiniseka ukuba awuphindi into esonjululwe phaya ezantsi kwephepha; Ngaphandle koko, uya kucetyiswa ukuba ufunde incwadana!
Ixabiso: $ 19.95 kwiSparkFun
Izikhonkwane ezisetyenzisiweyo: Sebenzisa izikhonkwane 2, 3, 4, 6, 7, A1, A0 kwi-Uno R3
I-MIDI (isiXhobo soMculo seDijithali yoDijithali) iguqule imboni yomculo kwii-1980s kwaye isasetyenziswa ngoku ngoku ukudibanisa izixhobo, ikhompyuter, iziphumo zeqonga, kunye nezinye izixhobo zekhompyutha. Ngesihlangu se-MIDI, unokunxibelelana nayo nayiphi na into enokuthi ithumele okanye ifumane idatha ye-MIDI kwaye iyifake kwiprojekthi yakho yeArduino.
Ikhaka le-MIDI lithengiswa njengekhithi kwaye lifuna ukuthengiswa. Ngolwazi oluthe kratya, ndwendwela i- Iphepha lemveliso leSparkFun . Unokufumana ezinye iitutorials ezilungileyo ngokubanzi kwi-MIDI kwi Indawo ka-Arduino kwaye NYU.edu kunye nezinto ezininzi ekubhekiswa kuzo tigoe.net kwaye Izixhobo zeHinton .
Ikhaka le-RGB LCD eline-16 x 2 ukubonisa umboniso
Ixabiso: $ 24.95 kwiAdafruit
Izikhonkwane ezisetyenzisiweyo: Sebenzisa izikhonkwane u-A4 kunye no-A5 kwi-Uno R3
Le LCD iluncedo (umboniso wekristale engamanzi) ukhusela iiphakheji yonke into oyifunayo kwibhodi enye. Ii-LCDs zifumaneka kwiifowuni ezindala eziphathwayo kunye neNintendo GameBoys (wow, kuvakala ngathi indala). Basebenzisa ifilimu ehleli phezu kombala oqinileyo, odla ngokubuyiselwa ngasemva. Iiphikseli zale filimu zinokuvulwa okanye zicinywe zenze imilo, isicatshulwa, okanye imizobo, kwaye yile nto uyilawulayo ngeArduino yakho. Kwiziko lekhaka ngumboniso we-RGB LCD, ke endaweni yokubambeka ngombala omnye kuphela, unokukhetha kuwo nayiphi na Umbala weRGB.
Isibane esingasemva seRGB silawulwa ngokuthe ngqo kwiArduino yakho. Umboniso ngumboniso we-16 x 2 (akukho mifanekiso), oko kuthetha ukuba ungabhala imiqolo emibini yoonobumba abali-16. Unokukhetha kwimiboniso emibini: isicatshulwa esimibala kwimvelaphi emnyama (engalunganga) okanye isicatshulwa esimnyama kwimvelaphi enemibala (elungileyo). Uhlobo lweempawu ze-LCD ezinokukhanyiswa okungafaniyo kunye nobukhulu obufumanekayo, ke qiniseka ukuba uyokuthenga.
Ikhaka le-RGB LCD lithengiswa njengekhithi kwaye lifuna ukuthengiswa. Endaweni yokusebenzisa izikhonkwane ezisithoba okanye nangaphezulu, i-LCD, ilayithi kunye namaqhosha ngokudibeneyo zisebenzisa ezimbini nje. Ngokusebenzisa i-I2C ukunxibelelana nekhaka, ungasebenzisa kuphela i-analog pin 4, eyi-data (SDA), kunye ne-pin pin 5, eyi-clock (SCL). Le protocol isetyenziswa kwizixhobo ezininzi, ke kuluncedo kakhulu ukwazi ngayo. Ngolwazi oluthe kratya kwi-I2C, jonga Isifundo esihle sikaJohn Boxall .
Ngolwazi oluthe kratya, jonga i- Iphepha lemveliso yeAdafruit kwaye isifundo .
Izikhuselo ziyafumaneka ezisebenzisa ubuchwepheshe obufanayo kodwa zingakupheleli koonobumba kunye neenombolo. Ukuba ujonge ukubonisa imizobo yakho, unokufuna ukusebenzisa isikhuseli sombala we-SparkFun sombala we-LCD, osebenzisa iscreen seNokia 6100, okanye isihlangu esikhulu sokuchukumisa iTFT.
2.8 TFT ikhaka lokuchukumisa ngomnwe wokuthinta
Ixabiso: $ 44.95 kwiAdafruit
Izikhonkwane ezisetyenzisiweyo: 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, A4, A5
Ukuba isibonisi seLCD asonelanga kuwe, zama i-TFT touch shield ukongeza umbala opheleleyo kunye nokuchukumisa igalelo kwiprojekthi yakho. Lo mboniso sisikrini se-TFT LCD-umahluko kwiscreen se-LCD esisebenzisa itekhnoloji ye-transistor (TFT) ethe tyaba ukuphucula umgangatho womfanekiso-ngesisombululo sama-pixels angama-240 x 320 kunye nemibala engama-18-bit, ikunika ii-262,144 shades. Isikrini sikwanofakwe kwiscreen sokuchukumisa ukubhalisa ukucofa ngomnwe naphina phezu kwescreen.
Ikhaka lokuchukumisa i-TFT lithengiswa lihlanganisene ngokupheleleyo kwaye alifuni kuthengiswa, ukuze ukwazi ukuyiplagi ngaphezulu kweArduino yakho. Ikhaka lokuchukumisa lifuna izikhonkwane ezininzi ukuze lisebenze kwaye likushiye ngezikhonkwane zedijithali ezi-2 kunye ne-3 kunye nezikhonkwane ze-analog 4 no-5. I-Pin 12 nayo iyafumaneka ukuba awusebenzisi umfundi we-microSD.
Phuma Iphepha lemveliso yeAdafruit kwaye i isifundo esigcweleyo . I-Adafruit nayo ngobubele ibhale epheleleyo Ithala leencwadi le-TFT lokuzoba iipikseli, iimilo, kunye nokubhaliweyo kwaye ilayibrari yescreen sokuchukumisa esibona u-x, y, kunye no-z othe tyaba, intshukumo ethe nkqo, kunye noxinzelelo .
Ixabiso: $ 12.95 kwiSparkFun
Izikhonkwane ezisetyenzisiweyo: 2, 3, 4, 5, 6, A0, A1
Ikhaka lokonwaba linayo yonke imisebenzi yolawulo lomdlalo wanamhlanje kwibhodi enye ehambelana neArduino. Ayiboneleli ngee-pushbuttons ezine ukwabela imisebenzi eyahlukeneyo kodwa kunye neqhosha elifihliweyo kulawulo lwentonga ngokwalo. Ngentonga yolawulo lwe-ergonomic, ungatshintsha kakuhle phakathi kwe-x kunye nee-y axes ukwenza intshukumo ngokuchaneka okukhulu.
Ikhaka lokonwaba lithengiswa njengekhithi kwaye lifuna ukuthengiswa. Isebenzisa izikhonkwane ezintlanu kuphela zedijithali kunye nezikhonkwane ezibini ze-analog, ishiya ezinye izikhonkwane ezininzi zeArduino simahla kwezinye izinto. Ineepushbuttons ezintlanu, zisebenzisa izikhonkwane zedijithali u-2 ukuya ku-6. Ukuhamba kwe-joystick kulinganiswa kusetyenziswa ii-potentiometers ezimbini: x, okanye oxwesileyo, intshukumo; Imephu ze-analog 1 Y, okanye nkqo, intshukumo.
Unokufumana iinkcukacha ezithe kratya kwifayile ye- Iphepha lemveliso leSparkFun . Unokubona kufundiso olunzulu lwendibano kwaye isikhokelo sokuqalisa ngokukhawuleza .
Imoto / i-stepper / i-servo yekiti ye-Adafruit v2.3
Ixabiso: $ 19.95 kwiAdafruit
Izikhonkwane ezisetyenzisiweyo: 9, 10, A4, A5
Iimoto zothando? Ngaba ufuna ukuzizama zonke? Ke imoto yeAdafruit / i-stepper / i-servo shield yeyona yakho. Ikhaka libizwa ngokufanelekileyo, likwenza ukuba ukwazi ukuqhuba zonke ezo motors uzithandayo. Unakho ukuqhagamshela ukuya kwii-servos ezi-5V zokuzonwabisa, ii-motor stepper, okanye ii-Motors ezi-DC ezi-bidirectional. Iiterminal zesikere zenza ukunamathela kunye nokutshintsha ii-motors kube lula. Xa ujongana nee-motors, kuhlala kubalulekile ukuba uqiniseke ukuba unendawo yangoku eyaneleyo yokuziqhuba zonke, ke isiphelo sendlela esijijwayo kwisikhuselo sikuvumela ukuba unike amandla iinjini zakho ngaphandle kweArduino yakho.
iidosi eziguqukayo ze-20 mg
I-Adafruit motor / stepper / servo shield ithengiswa njengekhithi kwaye ifuna ukuthengiswa. Izikhonkwane ze-A4 kunye ne-A5 zilawula nayiphi na i-DC edibeneyo okanye i-stepper motors, kunye nezikhonkwane 9 kunye ne-10 zilawula nayiphi na i-servos edibeneyo Oku kukushiya nezikhonkwane ezininzi zasimahla ukuba zisetyenziselwe ezinye izinto ezifakwayo okanye iziphumo.
Unokufumana iinkcukacha ezininzi kwifayile ye- Iphepha lemveliso yeAdafruit nakwi kufundiso olunzulu . Qaphela ukuba ungakanani umthwalo kwimoto kuba ikhaka lenzelwe ukubonelela ukuya kuma-600 mA ngemoto nganye, nge-1.2A incopho yangoku. Ukuba usondela kwi-1A, faka isinki esishushu kumqhubi wemoto ukukhupha ubushushu.
Kwakhona, abantu abalungileyo eAdafruit babonelela nge- ilayibrari ekulula ukuyisebenzisa kwiprojekthi yakho yemoto . Imoto eyonwabileyo!
Ixabiso: $ 29.95 kwiSparkFun
Izikhonkwane ezisetyenzisiweyo: 3
Ukuba ufuna ukwenza iprojekthi yeArduino ukuba ihambe ngakumbi, iibhetri ziyimpendulo. Endaweni yokusebenzisa iipakethi zebhetri yeAA okanye yeAAA, ikhaka leLiPower likuvumela ukuba usebenzise ibhetri ye-lithium egcwalisekayo endaweni yoko. Nangona iibhetri ze-lithium zilinganiswe njenge-3.7V kuphela, ezinye izixhobo ezikrelekrele ziyazinyathela ziye kuthi ga kwi-5V ukuzenza zanele ukunika amandla iArduino yakho.
Ikhaka leLiPower lidityanisiwe kodwa lifuna ukuhlengahlengiswa okuncinci ukuze uncamathisele izikhonkwane zentloko okanye iziseko zentloko. Ngenxa yokuba ikhaka leLiPower likho ukubonelela ngamandla kwaye alilisebenzisi, kusetyenziswa ipini enye kuphela. I-Pin 3 inokuqwalaselwa njenge-pin ephazamisayo yokuphazamisa ukubonisa xa ibhetri ihla ukuya kuma-32 ekhulwini okanye ngaphantsi.
Ngolwazi oluthe kratya, jonga i- Iphepha lemveliso leSparkFun . Ufumana amanqaku anomdla kwizixhobo zokusebenza ngokubhekisele kubunzima bokutshaja iibhetri ze-lithium, ke qiniseka ukuba ufunda zonke iikhomenti ezingezantsi kwenkcazo yemveliso.
Uninzi lweebhodi ezincinci zokuphuma kwe-lithium ziyafumaneka ezihambisa i-3.7V esemgangathweni, enje nge I-SparkFun USB LiPoly tshaja kwaye i I-Adafruit micro Lipo . Ezi bhodi zokuqhekeka zilungile xa zidityaniswe neArduino enevolthi efanelekileyo, njenge IArduino MKR1000 . Iibhodi ezinje ngeArduino MRK1000 ziluncedo xa uzama ukunciphisa ubungakanani beprojekthi yakho yeArduino.
IAdafruit Ultimate GPS ilogger shield
Izikhonkwane ezisetyenzisiweyo: 7, 8, 10, 11, 12, 13, A4, A5
Ikhaka logger leAdafruit Ultimate GPS likuvumela ukuba ulandelele kwaye ugcine ulwazi lwendawo usebenzisa iNkqubo yokuBekwa kwiHlabathi liphela. Ungayifumana indawo okuyo ngaphakathi kweemitha ezimbalwa. Yisebenzise ukwenza ubugcisa be-GPS okanye ukwenza imephu kuyo yonke intshukumo yakho ngenyanga. Kukwalungele ukukunika ixesha elichanekileyo. Idatha igcinwe kwikhadi le-MicroSD njengefayile ye-TXT, enokuthi ke ibekwe kwimephu zikaGoogle okanye ziboniswe ngenye indlela.
Ngomthamo wokugcina owandayo wamakhadi e-SD, unokugcina idatha ethe kratya kwikhadi le-SD kunokuba i-Arduino yakho inakho kwimemori yayo yangaphakathi. Esi sibonelelo songezelelweyo siluncedo ngakumbi kuba sigcina isixhobo sakho sokungena kwedatha ngaphandle kwesidingo sekhompyuter, ukuze ushiye ilaptop ekhaya uze uthumele isixhobo sakho seGPS emhlabeni!
Ikhaka logger yeAdafruit Ultimate GPS ithengiswa ngaphandle kwezikhonkwane zentloko eziqhotyoshelweyo kwaye ifuna ukuthengiswa. Izikhonkwane 10, 11, 12, no-13 zisetyenziselwa ukunxibelelana nekhadi le-SD. Imodyuli yeGPS isebenzisa uqhagamshelo lwehardware (izikhonkwane 0 kunye 1) okanye izikhonkwane ezimbini zonxibelelwano lwesoftware (izikhonkwane 7 kunye 8). Unokwenza eminye imisebenzi yokuzikhethela, enjengokubonisa i-LED ukubonisa xa idatha ingene, isikhonkwane sokujonga ukubetha kwewotshi yokuvumelanisa i-GPS, kunye nepini ukubona ukuba ikhadi le-SD likhona kwislot.
Fumana ikhaka kunye nolwazi oluthe kratya Iziqhamo . Ungajonga ifayile ye- kufundiso olunzulu kwisiza seAdafruit , eneenkcukacha zayo yonke into ukusuka kulwakhiwo lwekhithi ukuya kwikhowudi yeArduino, kunye nokusetyenziswa kwedatha yeGPS.
Isiqhamo seAdafruit FONA 800
Ixabiso: $ 39.95 kwiAdafruit
Iipini iimfuno: 2, 3, 4
Ikhaka leAdafruit FONA 800 liguqula iArduino yakho ibe siselfowuni esisebenzayo. Ngeli khaka, ungathumela kwaye ufumane iifowuni, imiyalezo ebhaliweyo, kunye nedatha. Konke okudingayo yi-SIM khadi ehlawulelwa kunye ne-eriyali, kwaye ukulungele ukunxibelelana nehlabathi. Ngokusebenzisa imiyalelo ye-serial ungathumela iikhowudi zokuthetha kwimodyuli yeSIM800L.
Ikhaka leAdafruit FONA 800 lithengiswa ngaphandle kwezikhonkwane zentloko. Kuya kufuneka uthenge i-eriyali ngesihlanganisi seSMA; I-Adafruit ibonelela nge-Slim Sticker yohlobo lwe-GSM / Cellular quad-band antenna . Iintetho zeArduino kunye neSIM800L ngezikhonkwane 2 kunye 3 zisebenzisa ilayibrari yeSoftwareSerial.
Ikhadi leSIM kufuneka libe nekhredithi eyaneleyo yokwenza iintshukumo ozama ukuzenza. Abo bahambisa imiyalezo engenamda baluncedo ngakumbi. Olunye ukhetho olongezelelekileyo luyimic kunye nesithethi; ngaphandle kwabo, ngekhe ukwazi ukwenza enye into ngaphandle kokutsala umnxeba kwaye uyixhome.
Ungajonga ifayile ye- kufundiso olunzulu kwisiza seAdafruit .
Isikhuseli sebhodi yemitha yeGiger
Yenziwe ngu: Liberium
Ixabiso: $ 170 ekuPhekeni iiHacks
Iipini ezifunekayo: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Ibhodi ye-radiation sensor mhlawumbi yenye yezona zinto zithandekayo zeArduino. Ikuvumela ukuba ujonge amanqanaba emitha kwindalo esingqongileyo. Le bhodi yenzelwe ukunceda abantu baseJapan babek 'esweni amanqanaba emitha elandela ukuvuza kwemitha eFukushima ngo-Matshi 2011. Ikhawuntari yeGiiger inokusebenzisa iityhubhu ezahlukeneyo zeGeiger ukufumana iintlobo ezahlukeneyo kunye namanqanaba emitha. Kukho umboniso weLCD, i-LED, kunye nesithethi se-piezo sokufumana ingxelo.
Eli khaka lisebenzisa iityhubhu zeGiiger ezisebenza kumoya ophakamileyo oyingozi (400V - 1000V), ke oko kufuna ukhathalelo olugqithisileyo. Kungcono ukugcina ibhodi yesenzi semitha kwindawo ebiyelweyo ukuze ingabikho kunxibelelwano lomntu. Imitha iyingozi, kodwa nombane unjalo. Ukuba awuyazi into oyenzayo, sukuzonwabisa.
Isithethi se-piezo kunye ne-LED zidityanisiwe kwipini ye-2, ebangela ukuphazamiseka nayo yonke into ebangelwa yityhubhu yeGiiger. Kuxhomekeke kumbhobho osetyenzisiweyo kunye nenani leempundu okanye ukubalwa ngomzuzu (cpm), ungalichaza inqanaba lemitha kwiiSieverts ngeyure. Izikhonkwane ezi-3 ukuya kwezi-8 zisetyenziselwa umboniso weLCD ukuvelisa ufundo lwesenzi ngokweenkcukacha. Izikhonkwane ze-9 ukuya kwi-13 zisetyenziselwa ibha ye-LED ukunika ingxelo ebonakalayo yenqanaba leemitha. Ii-LED zokuqala ezintathu ziluhlaza. Ezi zimbini zokugqibela zibomvu, zibonisa ukuba kwinqanaba eliphezulu kwaye elinokuba yingozi lokusasazeka kwemitha kuyasondela.
Iinkcukacha ezithe kratya kule projekthi zifumaneka kwi- Ukupheka Hacks iphepha lemveliso
I-viagra kunye ne-beta blockers
umqolo ithenda ukubamba
Idizili ibhetele kunegesi
icarvedilol 25 mg yecwecwe
ipilisi etyheli v 3601